Idijithali yaseNtshona iveza i-12 kunye ne-14 terabyte hard drive | Iindaba zeGajethi
Western Digital ikhathalogu yayo ye-SSD disk drive iyaqhubeka nokuvela kwaye, kwesi sizukulwana sesine, ibhengeze nje ikhathalogu entsha eyilelwe ngokukodwa ukusetyenziswa kosomashishini eyaziwa ngegama lika I-UltraStar He12 yenziwe ziiyunithi ezimbini zamandla ahlukeneyo, i-12 kunye ne-14 terabytes. Njengokuqhubela phambili, mandikuxelele ukuba, ubuncinci okwangoku, amazwe aliqela akakhange abhengeze ngexabiso aza kuthi afike ngalo kwintengiso, nangona, ngenxa yokuqhelaniswa kwayo, ngokuqinisekileyo iya kuthintela nomsebenzisi wasekhaya.
Into esiyaziyo kukuba ezi zimbini zintsha zeDigital hard drive ziya kufikelela kwintengiso kwangoko ngo-2017. Ukucacisa kancinci, njengoko kubhengeziwe, ekugqibeleni inguqulelo yomthamo we-12 terabyte iya kufumaneka kwangoko ku-2017 ngelixa uhlobo lwamandla aphezulu luzakufika kwiiveki ezimbalwa kamva. Ngokuphathelene neyona nto inomdla, qaphela ukuba ezi yunithi zintsha baphucula phakathi kwe-10 ukuya kwi-20% kwiidiski zangaphambili ethi, ngaphandle kwamathandabuzo, inyuke ngokuqaphelekayo.
Idijithali yaseNtshona iza kwi2017 ecaleni kweedrive ze-SSD ezintsha ezili-12 kunye ne-14.
Ngaphakathi sifumanisa ukuba ezi zixhobo zintsha zinobume obutsha obubavumela ukuba bazisebenzise ukuya kuthi ga kwiipleyiti eziyi-8 ngefomathi ye-intshi eyi-3,5. Oku kubangele ukuba abo banoxanduva loyilo kunye nokwenza bahlengahlengise lonke icandelo langaphakathi leediski. Ngokweenkcukacha, i-Western Digital Ultrastar He12 ine-7.200 rpm SATA kunye ne-SAS interface, i-megabytes ezingama-256 zememori yokugcina kunye nokusetyenziswa okuphakathi kwe-7,2 kunye ne-9,8 watts.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » isibulali » Idijithali yaseNtshona ihambisa i-12 kunye ne-14 terabyte hard drive
Uyigcina njani ukhuphelo lwakho lweNetflix kwikhadi le-MicroSD